ဖကျဖကျကွီးကို မောသှားတာဘဲရှငျ – My Blog
မနကျဖွနျ ဝ၈၀ဝ နာရီ မှာ ဘော့ဈနဲ့တှရေ့မယျ…စောစောရောကျအောငျလာခဲ့ …လှလှပပ လေးလညျး ပွငျလာခဲ့နျော…ကမြကို သသေခြောခြာ မှာနပေါတော့တယျ… မနကျဖွနျ မှာသူဌေးနဲ့ ဘယျလိုကွုံတှေ့ ရအုံးမယျ မသိ..ရငျတှခေုနျလိုကျတာနျော…. ဘရား သားကုမ်ပဏီ … သူဌေးနဲ့တှဘေို့ မနကျဝ၈၀ဝနာရီ ခြိနျးထားတာ ဆိုတော့ စောစောလေး ကုမ်ပဏီ ကိုရောကျအောငျလာခဲ့ပါတယျ.. တိုကျဆိုငျလိုကျတာ… မနကေ့ ပုလှရှေငျ အကိုကွီးနဲ့ လှခေါးထိပျမှာ တှတေ့ော့ ကမြကို သူ့ရုံးခနျးထဲ ချေါသှားပါတယျ…ကမြ မ လိုကျခငျြပမေဲ့….မလှနျဆနျနိုငျသေးဘူးလေ…ကမြ အလုပျခနျ့စာက မရသေးဘူး..သူဌေးနဲ့ကလညျးမတှရေ့သေးဘူးဆိုတော့…သူ တို့ကိုဘဲအားကိုးရအုံးမှာ.. ဒါကွောငျ့သူချေါရာနောကျလိုကျသှားခဲ့ရပါတယျ…အခမျးထဲလဲရောကျရော..ဟငျး..စပွီလေ.. မနကေ့ ညီမလေး မှုတျပေးတာ သိပျကောငျးတာဘဲ..အခုတဈခါလောကျ မှုတျပေးစမျးပါ.. ရှငျ… ကမြ သူဌေးနဲ့တှရေ့အုံးမယျလေ.. သူဌေး က မလာသေးပါဘူး ….
ဒို့နှဈယောကျထောကျခံထားရငျ မငျးကိုအလုပျခနျ့ မှာသခြောပါတယျ…ဒို့နှဈယောကျက သူဌေးရဲ့ လူယုံတှလေေ… ကမြ မှာငွငျးနိုငျ စှမျးမရှိတော့ပွီ.. သူ့ဘောငျးဘီဇဈကိုခြှတျပေးလိုကျတော့ ကမြ မှုတျပေးရနျ မှတဈပါး အခွားမရှိတော့ပွီ… သှေးပူလကေ့ငျြ့တယျ လို့ဘဲ..စိတျထဲမှာ မှတျထငျထားလိုကျပါတော့တယျ… ကမြ စတေနာထားပွီး ကောငျးကောငျးလေး စုပျပေးလိုကျပါတယျ..လီးဒဈ လေးကို လြှာဖြားလေးနဲ့ ထိုးပေးတာတို့.. လီးထိပျ အကှဲကွောငျးလေးကို လြှာဖြားလေးနဲ့ ကလိပေးတာတို့ လုပျပေးလိုကျပါ တယျ….သူ့ရဲ့အသကျရှုသံတှမွေနျလာတယျ.. လီးကွီးလဲ မာတောငျလာတော့တာပေါ့…ကမြ သူ့ရဲ့ လီးထိပျကို ခပျတငျးတငျးလေး နှုတျခမျးနဲ့ ဖိစုပျ ထားလိုကျပွီး လကျက ဂှငျး တိုကျ ပေးလိုကျတော့…
ဟငျး..ဟငျး..ကောငျးလိုကျတာ..အငျး…ခပျမွနျမွနျလေးလုပျပေးပါ..ဟငျး.. ကမြ ခပျမွနျမွနျလေးလုပျပေးလိုကျတော့ သူကောငျး လှနျးလို့ သူ့လီးကွီးကို ရှကေို့ထိုး ..ထိုးပေးပါတော့တယျ..ကမြ လညျခြောငျးထဲ ကိုဝငျအောငျသှငျးနတောလေ…ကမြသိတာပေါ့… နှုတျခမျးလေးနဲ့ ဖိထားလိုကျတော့ မဝငျတော့ဘူးပေါ့.ဒ.ါပမေဲ့..အခြိနျကလညျး မရှိ တော့ဘူးဆိုတော့..တဈခကျြ..နှဈခကျြလောကျ လညျခြောငျးထဲ ထိုးထညျ့ ပေးလိုကျတယျ ဆိုရငျဘဲ..ခြောငျးဆိုးရတော့တာပေါ့… အဲဒီ တော့ သူပွီးခငျြပွီလေ..ကမြ ကိုမညှာမတာ လညျဂုတျက ကိုငျပွီး ထိုးထိုးထညျ့နတေော့တာဘဲ… သူ့လီး အဆမတနျ မာလာပွီလေ ..ကမြသူ့ လီးကိုဂှငျးတိုကျပေးလိုကျ တော့….သုတျရတှေေ ကမြ ပါးစပျထဲ ပနျးထညျ့တော့တာပါဘဲ.. သူ့လီးကို အပွငျမှာထုတျပွီး ခပျမွနျမွနျလေး ဂှငျးတိုကျပေးလိုကျ ပါတယျ..
အား..အီး. .အငျး…ဝူး…ဟငျး… သူ့သုတျရညျ တှေ ကမြ မကျြနှာကို ပနျးထညျ့လိုကျပါတော့တယျ..ကမြ အကငြ်္ီ စကတျ တှေ ပေ ကုနျတော့တာပေါ့.. ခကျပွီ …ကမြ အခုမှ ဝတျစုံပွနျလဲလို့ကလညျး..အခြိနျမမှီတော့ပွီ…ကုမ်ပဏီက ပေးထားတာက လညျး..လောလောဆယျ ဒီတဈစုံဘဲ ရသေးတာမို့ …ကမြ ငိုခငျြလာမိပါတော့တယျ… ငိုမဲ့မဲ့ မကျြနှာလေးကို ကွညျ့ပွီး …ပုလှရှေငျ အကိုကွီးက..ပွုံးစစနဲ့.. စိတျမပူပါနဲ့ စီစီလေး ..အကိုကွီး အပျေါကောငျးတဲ့ ညီမလေးကို ‘ဒုက်ခမရောကျစရေပါဘူး…အကိုကွီးဆီ မှာ..အရငျက အတှငျးရေးမှူး မလေးဝတျသှားတဲ့ ဝတျစုံရှိတယျ…အဲဒီဝတျစုံ ဝတျသှားပါ..
ဘော့ဈကဒီဝတျစုံလေးကို သိပျသဘောကတြာ..သူကိုယျတိုငျ အမွတျတနိုးနဲ့သူ့ဆျောလေးကိုဝယျပေးထားတာပါ….ဒီဝတျစုံလေးကို တှရေ့ငျ..ဘော့စိတျတှေ လှုပျလြှားလာမှာပါ… ပွီးတော့..ညီမလေးကို…အပြိုလားလို့ မေးရငျ..ယောကျြားမရှိလို့ အပြိုလို့ ပွောရငျရ ပါတယျ…အပြိုစဈစဈတော့ မဟုတျပါဘူးရှငျ.. လို့ဖွနေျော… ရှငျ….အကိုကွီးတို့ ပွောတုနျးက အပြိုစဈစဈမှ ကွိုကျတာဆို..အခု ဘယျလိုဖွဈတာလဲ.. ဟုတျတယျလေ..အကိုကွီးတို့ကတော့ အပြိုစဈစဈမှ ကွိုကျတယျ…ဘော့ဈ ကတော့ နောကျကွောငျးမရှုတျ ရအောငျ အပြိုတော့ ဖွဈရမယျ..
‘ဒါပမေဲ့ အတှအေ့ကွုံရှိပွီးသားကို ကွိုကျတယျ.. အပြိုစဈစဈ ဆိုရငျပွောရ ဆိုရ စညျးရုံးရတာတှေ အတငျးယူခိုငျးတာတို့ ခြိနျး ခွောကျတာတို့ ဖွဈဘူးတယျ.. ပွီးတော့ အတှအေ့ကွုံမရှိတော့ နားလညျမှုမရှိဘူးလေ.. အဲဒါတှေ သငျပေးဘို့ကလညျး အခြိနျမပေး နိုငျဘူး.. နောကျတဈခကျြ.. ဘော့ဈက ပုလှမှေုတျပေးတာကွိုကျတယျ… အကိုကွီးလိုပေါ့…. နောကျပွီးပုံစံ အမြိုးမြိုးနဲ့ လိုးရတာကို ကွိုကျတယျ… ဟိုအကိုကွီးလိုပေါ့…အကိုကွီး တို့နှဈယောကျနဲ့ တှပွေီ့းပွီ ဆိုလို့ကတော့ ညီမလေး ဘော့ဈနဲ့ အဆငျပွမှောပါ… ပညာစုံ သငျပေးလိုကျပွီလေ… ကြေးဇူးပါဘဲရှငျ..နောကျလညျး အခြိနျရယငျ မှုတျပေးပါ့မယျ..အဝတျအစားတှေ လဲပွီးပွီ ဆိုတော့ သှားရအောငျနျော အကိုကွီး လိုကျပို့ပေးပါ့မယျ.. အလုပျရှငျ သူဌေး၏ ရုံးခမျး မို့ ဝငျရမှာကွောကျနသေညျ…ပုလှရှေငျ အကိုကွီး လိုကျပို့ပေး၍ ဝငျသှားလိုကျသညျ.. အထဲမှာ သူဌေးနှငျ့ အတူ မနကေ့ လိုးခဲ့ကွသညျ့ အကိုကွီးကိုတှရေ့၍ ဝမျးသာသှားသညျ… ယုံကွညျစိတျမြားလညျး..ရှိလာသညျ..
သူဌေးက ကမြ ကိုယျရေးရာဇဝငျနဲ့ လြှောကျလှာကိုကွညျ့နသေညျ..အကိုကွီးက ကမြကိုမကျြစိမှိတျပွပွီး လကျမထောငျပွသညျ.. အခွအေနကေောငျးတယျ ပေါ့…ကမြ မကွောကျတော့ပါ…ရဲရဲဝံဝံ ရငျဆိုငျရနျ အားအငျမြား အပွညျ့အဝရှိနပွေီဖွဈသညျ… မစီစီ ရှငျ မငျးက အပြိုစဈစဈလား ရုတျတရကျ ကွီးမေးလိုကျတော့ ကမြ ဘာက စပွီးဖွရေမယျမှနျးမသိ ကွောငျသှားပါတယျ.. အကို ကွီးက ဝငျပွီးဖွပေေးပါတယျ.. “`သူဌေး …သူကလေ…“ သူဌေးက လကျကာပွလိုကျပွီး…… မငျးကိုမေးတာမဟုတျဘူး..မငျးထှကျ သှားနိုငျပွီ ကမြ တုနျလှုပျသှားပါတယျ..အကိုကွီးကိုမသှားဘို့ ဆှဲထားလိုကျပါတယျ… အကိုကွီးက ကမြကိုပွုံးပွီး…ခေါငျးညိမျ့ပွ တယျ…ကမြ ဘာကိုဆိုလိုမှနျး တော့မသိဘူး ..စိတျမပူနဲ့လို့ဆိုလိုတာလား..ကမြ မတားတော့ပါဘူး.. အကိုကွီးလညျးထှကျသှား ရော သူဌေးက ကမြကို ထပျမေးပါတယျ…
မစီစီ မေးတာ မဖွသေေးဘူးလေ.. ကမြ သတိရ ပွီ…ပုလှရှေငျ အကိုကွီးသငျပေးလိုကျတာလေ…ခကျြခငျြးဘဲ..ပွနျဖွလေိုကျပါ တယျ… ကမြ ယောကျြား တဈခါမှ မရဘူးသေးပါဘူး..မင်ျဂလာလညျး တဈခါမှ မဆောငျဘူးသေးပါဘူး… ဒါကွောငျ့ အပြိုလို့ ပွော မယျ ဆိုရငျတော့ရပါတယျ..ဒ‘ါပမေဲ့ အပြိုစဈစဈတော့ မဟုတျရပါဘူး ရှငျ… သိပျကောငျးတဲ့ အဖွဘေဲ…မစီစီ အမှတျပွညျ့ ပေးလိုကျပါတယျ..မိနျးခလေး တျောတျောမြားမြားက အပြိုမဟုတျဘူးလို့. ပွောရမှာကို ဝနျလေးကွတယျ.. ဒ‘ါ့ကွောငျ့ ညာပွော တတျကွတယျ…
ဖကျဖကျကွီးကိုသှားတာဘဲ ၂ ဒါဟာ လိမျညာမှုဘဲ..သစ်စာမရှိတာဘဲ…မစီစီက တော့ ရိုးသားတယျ…ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိတယျ..ဒီ အခကျြကို အဓိကလိုခငျြတာဖွဈတယျ… သိပျကွိုကျသှားပွီ မစီစီ…. နှုတျမေးခှနျးကတော့ ဒ‘ီလောကျပါဘဲ…လကျတှေ့ စမျးသတျ မှုဘဲ ကနျြပါတော့တယျ… ကမြ သိပျပြျောသှားတယျ..ပုလှရှေငျ အကိုကွီး ကိုလညျး ကြေးဇူးတငျလိုကျတာ..နောကျတှရေ့ငျ ကောငျးကောငျးလေး မှုတျပေးလိုကျအုံးမယျ… သူဌေး လေ….ကမြဆီကို ထလာပွီး တဈကိုယျလုံးခွဆေုံး ခေါငျးဆုံး ကွညျ့နလေိုကျ တာ အကွာကွီးဘဲ…. ကမြ ဘာလုပျသငျ့လဲ…ကမြက စ ရမှာလား..သူကစမှာလား…ကမြသူ့ မကျြနှာကို အကဲခတျနရေတာ ပေါ့… သူ ကမြ ပုခုံးလေးကို ဖှဖှလေး ကိုငျပွီး ဆကျတီခုံ ကိုချေါသှားပါတယျ…
ကမြလညျး အလိုကျသငျ့ လိုကျသှားတာပေါ့.. ဆကျတီခုံပျေါမှာထိုငျလိုကျ တာနဲ့သူကမြကို ဖကျပွီးပါးနှဈဖကျကိုနမျးပါတယျ…သူက စပွီလေ….ကမြငွိမျငွိမျလေး နပေေးတော့..သူတဈဆငျ့တကျ ပွီး ကမြ နှုတျခမျးလေးကို နမျးတယျ..ပွီးတော့ စုပျတယျ ကမြလညျး တုနျ့ပွနျမှု ပေးတဲ့အနနေဲ့ သူနှုပျခမျးကို ပွနျစုပျပေးလိုကျတာ ပေါ့ ..ဒါမြိုးတော့လာမလုပျနဲ့…ရဲကိုကိုက သခြောသငျပေးထားပွီး သား….နှုတျခမျးခငျြး စုတျတဲ့အခါ…လြှာလေးက ဝိုကျဆှဲ..ကာထိုး…တဲ့ထိုး အမြိုးမြိုးလုပျပွလိုကျတော့…သူကနြေပျသှားတယျ..သူ့ ရဲ့လြှာနဲ့ ကမြ နှုတျခမျးကိုလြှောကျ ထိုးနတေော့ ဘာရမလဲ..သူ့လြှာကို ကမြ စုပျပဈလိုကျတာပေါ့.
သူကလညျး အားကမြခံ ကမြရဲ့ လြှာကို ပွနျစုပျတယျလေ…ကမြ ဖီလငျတကျလာတယျ..အပျေါနှုတျခမျးကိုစုပျပေးလိုကျ ..အောကျနှုတျခမျးကိုစုပျပေးလိုကျ အပွနျအလှနျ နမျးစုပျနလေိုကျကွတာ လောကကွီးကို မသှေ့ားတာဘဲ.. နမျးနရေငျးက သူ့လကျတှကေမြရဲ့ စနနှေဈပှငျ့ ပျေါ ရောကျလာတယျ.. သူကမြ ရငျသားတှကေို အကငြ်္ီ ပျေါကနေ ကိုငျလိုကျပွီး..ကမြ ကိုအကဲခတျနတေယျ..ကမြ လညျးဖီးတကျနေ တော့.. ခြှတျပေးလိုကျရငျကောငျးမလား …ရှငျဘာလုပျခငျြလို့လဲ…သူ့ကိုပွုံးစစနဲ့ ပွနျကွညျ့လိုကျတာပေါ့…
သူ ..ကမြ နို့သီးကို ဖွဈရငျးနဲ့ ကမြ နားရှကျ ကိုပါးစပျနဲ့ စုပျပေးလိုကျတာ…တဈကိုယျလုံးကိုထှနျ့ထှနျ့လူးသှားတာဘဲရှငျ…လညျပငျး တဈလြှောကျကိုလညျး.. လြှာနဲ့..ဖိဆှဲလေး ဆှဲလိုကျတော့..ကမြ ကွကျသီးမှေးညငျးလေးတှတေောငျထသှားတယျ….ကမြသိတာ ပေါ့..ကမြကိုစိတျလာအောငျ ဆှပေးနတောမလား…ပွီးတော့မှ..ဟငျး..ပွောလိုကျခငျြဘူး…. ဘာရမလဲ..ကမြလညျး ..သူ့ အကငြ်္ီ ကိုဆှဲလှနျလိုကျပွီး .. သူ့ ဗိုကျသားလေးတှကေို လြှာနဲ့ရကျပေးလိုကျတာ သူလညျး ထှနျ့ထှနျ့ကို.လူးသှားတာဘဲ. သူ..ကမြ အပျေါက ကုတျအကငြ်္ီကို ခြှတျလိုကျပါတယျ..
အတှငျးက အကငြ်္ီကို ကယျြသီးဖွုတျလိုကျပွီး ထှကျလာတဲ့ စနနှေဈခိုငျကို ဖွဈညှဈစုပျကိုငျလိုကျပါတယျ…ပနျးနုရောငျသနျးနတေဲ့ ကမြရဲ့ နို့သီးထိပျလေးကို လကျညှိုးလေးနဲ့ ဆှပေးတော့ကမြ နို့သီးခေါငျးလေး မာလာတာပေါ့… သူ့ပါးစပျကွီးနဲ့ ကမြ နို့နှဈလုံးကို တဈဖကျစီ စို့ပေးပါတယျ..နို့သီးလုံးလေးတှကေိုလြှာနဲ့လှညျ့ပေးလိုကျတော့….ဘယျလိုပွောရမှနျးမသိအောငျဘဲရှငျ…ကမြ တဈအားယားလာတာပေါ့ နို့သီးလညျးယားတယျ…ဖုတျဖုတျလညျးယားလာတယျ..
တဈကိုယျလုံးခါရမျးသှားလောကျအောငျ…ဖီးတကျလာပါတော့တယျ…ရငျထဲမှာ ဗလောငျဆူနတေော့တာပါဘဲရှငျ… ကမြ ဆောကျ ဖုတျထဲက အရညျ ကွညျလေး တှထှေကျလာတော့တာပေါ့….နို့သီးခေါငျးလေးတှေ ကိုစို့ပေးနရောက ကမြ ဗိုကျသားလေးတှကေို.. လြှာနဲ့ရကျပေးပါတယျ…ယားကြိကြိနဲ့ အတျောခံလို့ကောငျးတယျ…ကမြ ခကျြကို လြှာဖြားလေးနဲ့ထိုးမှလေိုကျတော့ ကမြ အသဲတှေ ကလီစာတှေ..ပွောငျးပွနျလှနျလိုကျသလို ခံစားရပါတယျ..ရှငျ.. ဟငျး..ဟငျး..ဟငျး…အငျး….အငျး… သူ့ ပါးစပျ ကွီးက ကမြ ဆီးခုံမှေးတှကေို လြှောကျရကျပေးနေ ပွနျပါပွီ…ကမြ ကော့ပွနျနတေော့တာဘဲ…ကမြ ဆောကျစိကိုလြှကျ ပေးရငျ သိပျကောငျးမှာ ဘဲ…ကမြ သိပျယားနတောကိုး တောငျ့တမိပါတယျ…..
ကိုကိုရယျ..စီစီရဲ့စိစိလေးကို လြှကျပေးပါလားရှငျရယျ…ပါးစပျက ထုတျပွောလို့လဲမရဘူးလေ..မိနျးမသားဘဝကိုး…ရငျထဲကဘဲ တောငျ့တနမေိတော့တယျ…ကိုကိုရယျ ရှငျဝဋျလညျလိမျ့မယျသိလား….. သူလေ ပေါငျတှငျးသားလေးတှကေို လြှောကျရကျပေးနေ တာ..စိတျတိုခငျြစရာပါဘဲ… တမငျလုပျနတောလားမသိ…ကမြ မတတျနိုငျတော့ပွီ… ကမြ သူ့ခေါငျးကို ကိုငျပွီး ဆောကျဖုတျဝမှာ တေ့ ပေးလိုကျပါတော့တယျ…. ဆောကျဖုတျအကှဲကွောငျး တလြှောကျ ဆုနျခြီ ဆနျခြီ လြှာနဲ့ထိုးလိုကျ ရကျလိုကျနဲ့ပေါ့….ကမြ ဆောကျစိကိုလုံးဝ မထိဘူး… ကမြ အလိုကိုသူမလိုကျဘူး…သိပျဆိုးတဲ့ လူကွီး… ကမြသိပျခံခငျြနပွေီ..လိုးပါတော့လို့..အျောဟဈ သာပဈလိုကျခငျြတော့တယျ….
ခွလေေးဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး ဆန်ဒပွလိုကျတော့မှစိစိလေးကိုလြှာနဲ့ လကျြလိုကျပါတော့တယျ.. သူ တျောတျောလေးကို မိနျးမ ကမျြးကတြေဲ့လူကွီး…ကမြရဲ့ရှကွေုတျလေးကို အသာအယာလကျနှဈဖကျနဲ့ဖွဲလိုကျတော့…ပတ်တမွား စိစိလေး ပွူးထှကျလာတာ ပေါ့…အဲဒီ.. ပတ်တမွားလေးကို…ခြိုခငျြယကျသလို…ယကျလိုကျ…..တဖွေးဖွေးခငျြး…လြှာလေးနဲ့…တဆတျဆတျ ထိုးလိုကျ…လြှာ ပွားကွီးနဲ့….ပှတျဆှဲလိုကျ…ပညာကုနျပွနလေိုကျတာ…ကမြ..နှဈခြီလောကျတောငျ.. ပွီးသှားတယျထငျပါရဲ့..ကောငျးလိုကျတာကို လှနျပါရော…ဟငျး..ဟငျး..ဟငျး….. ကမြငွိမျသှားတော့…သူ နောကျတဈမြိုးလုပျပွနျပွီ…… သူလေ ကမြ ဆောကျဖုတျထဲကို လကျညှိုးလေးတဈခြောငျးနဲ့ ထိုးထညျ့လိုကျတယျ…အရညျတှကေလညျးထှကျနတေော့ ခြောခြောခြူခြူဘဲ ဝငျသှားပါတယျ…လကျ ကိုပကျလကျလှနျလိုကျပွီး…ဆောကျခေါငျး အမိုးကို လှနျလှနျပွီးကုတျနလေိုကျတာ… ကမြဆောကျခေါငျးထဲက အကွောလေးကို သှားသှားပွီးခလုပျတိုကျတော့ ကငျြကငျြသှားတာဘဲ…ယားလဲ တဈအားယားတယျ…သူမြားတှပွေောပွောနတေဲ့ ဂြီစပေါ့…ဆို တာ လားမသိဘူး…….
အား..အား…အား….. အဲသလိုလုပျ နေ တော့ ကမြဆောကျရညျတှပေိုထှကျလာတာပေါ့…လကျတဈခြောငျးခြောငျသှားတော့ လကျ နှဈခြောငျးထိုးသှငျးလိုကျပွနျပွီ….ကိုကိုရယျ..ဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲ…ဟငျ….ညီမ…ခံခငျြနပွေီဆိုတာသိရဲ့လား… ဟငျး..အငျး..အငျး… လကျနှဈခြောငျးနဲ့ ကမြ ဆောကျခေါငျးထဲက အကွောကိုလညျးကုတျမိရော ..ကမြတောငျ့တနတေဲ့ ဆောကျစိ လေးကို လြှာနဲ့ထိုးပွီးရကျလိုကျပါတော့တယျ…အခြိနျကိုကျကှကျတိဘဲ…. ကမြအလိုလို ကော့ ကော့ပေး နမေိပါတယျ… ကမြ ရုံး လို့လဲမရ ရုံးလညျးမရုံးခငျြ …ကောငျးလိုကျတာလဲ လှနျပါရော…. ဆောကျခေါငျးထဲက အကွောကို သူကုတျထားလိုကျပွီး..ကမြ ဆောကျစိကို လြှာနဲ့ အဆကျမပွတျရကျပေးလိုကျတဲ့အခါမှာတော့….
အား..အား..ဟား..ဟငျး..ဟငျး…အီး…အဈ..အဈ.. ကမြ ဆောကျခေါငျးတဈလြှောကျ ရှုံ့ခြီ ပှခြီ ဖွဈလာပွီး …ကမြတဈခြီ.ထပျပွီး..ပွီးသှားပါတယျ….ဆောကျရညျတှလေညျး…စီးထှကျလာ ပါ တော့တယျရှငျ.. သူ ကမြ ပွီးသှားတာကို သိတယျလေ…သူ့အကငြ်္ီတှခြှေတျလိုကျပါတယျ.. ကမြကိုဆှဲထူလိုကျပွီး နှုတျခမျးကို နမျးလိုကျပါတယျ…နို့နှဈခိုငျကိုလညျး…တဈဖကျ..တဈလှညျ့စီ..စို့ပေးလိုကျ… လကျတဈဖကျကလညျးတဈကိုယျလုံးလိုကျပှတျလိုကျ နဲ့…အလုပျကိုရှုတျနတေော့တာဘဲ…. ခဏကွာတော့ ကမြ စိတျတှေ လှုပျလြှားလာပါတော့တယျ..သှေးနဲ့သားနဲ့ဆိုတော့ဒီလောကျဆှ နမှေတော့ဘယျခံနိုငျတော့မလဲ…. ဒီတဈခါတော့ကမြအလှညျ့.. ရဲကိုကိုနဲ့ဟိုအကိုကွီးနှဈယောကျသငျပေးလိုကျတဲ့ပညာတှကေို အစှမျးကုနျအသုံးခပြွီး…သူ့စိတျကိုဖမျးစားရမှာပေါ့…ကမြလုပျနိုငျမှာပါ…. ကိုယျ့ကိုကိုယျ အားပေးပွီး…ကမြ လုပျငနျးစပွီပေါ့… ဘယျကစရငျကောငျးမလဲ…ကမြ တှပေ့ါပွီ… ဒေါသတကွီးနဲ့ ကမြကိုယျ ခေါငျးတဆတျဆတျညိမျ့ပွီးချေါနတေဲ့… သူ့ငယျပါကွီး ပေါ့…. သူလညျးကမြတဈကိုယျလုံးစိတျကွိုကျနှယျထားတော့..စိတျလာနပွေီလေ..ကမြသိတာပေါ့…သူ့ လီးကွီးက မာတောငျနေ တာဘဲ…ကမြ သူ့ရဲ့ လမှေးတှကေိုလြှာနဲ့ရကျပေးလိုကျတယျ…
ဖကျဖကျကွီးကိုသှားတာဘဲ ၃ ဥလေးနှဈလုံးကိုလညျး..ဖှဖှလေးစုတျပေးလိုကျတယျ… အငျး..အငျး… ငွီးသံသဲ့သဲ့ထှကျလာ တယျ….ဂှေးဥနှဈလုံးကိုမတငျလိုကျပွီး… ပေါငျခွံလေးတှကေို လြှာနဲ့ရကျပေးလိုကျတယျ… ပွီးတော့ သူ့ဂှေးဥလေး နှဈလုံးကို လြှာနဲ့ ရကျပွီး ပါးစပျနဲ့စုပျပေးလိုကျတော့ …… သူ့လီးက အရညျကွညျတှထှေကျလာတာပေါ့… သူ့လီးရဲ့ဒဈထိပျလေးကိုလုံးဝမထိအောငျ လုပျပေးထားတာလေ…. သိတယျမလား… သူမြားတုနျးက..သူလုပျထားတာ… ဟငျး..ဟငျး..ဟငျး.. သူဂနာမငွိမျဖွဈနပွေီ…သူ့ အလိုကိုမလိုကျဘဲထားတော့….သူ့ပညာနဲ့သူထိနပွေီပေါ့.. မှတျပွီလား… သူမနေ နိုငျတော့ဘူး…ကမြ ခေါငျးကိုကိုငျပွီး သူ့လီးကို ပါးစပျဝမှာလာတပေ့ေးတယျ…ကမြ ရီခငျြလိုကျတာ… လကျစားခလြေိုကျရလို့လညျး ကနြေပျနမေိတယျ…ပညာနညျးနညျး ပေးလိုကျတာပါ… တဈအားလညျး..ပညာမပေးရဲဘူး…သူစိတျဆိုးသှားမှဒုက်ခ…အလုပျခနျ့စာကရသေးတာမဟုတျ.. အခုထိ စာမေးပှဲ ဖွနေဆေဲလေ..သိတယျမလား… ကမြ စတေနာနဲ့ စိတျပါလကျပါ ဒဈလေးကို စုပျပေးလိုကျပါတယျ….သူကောငျးလှနျးလို့ တ ဆတျဆတျတုနျနတေော့တာဘဲ… လီးကိုအရငျးက ကိုငျပွီးအထကျအောကျ ပှတျတိုကျ ပေးလိုကျတော့ သူ့ဒဈညိုကွီး.. ဒေါသအ မွောငျးမွောငျးထနလေိုကျတာ…သူမြားကိုတဈကယျစိတျလာစတေယျ…
ဒါကွီးနဲ့..ကမြကို အပီဆှဲတော့မှာလေ…ဟငျး..ဟငျး… သူ ကမြ ဖငျကိုလှမျးကိုငျလိုကျတယျ.. ဖငျဝလေးကို လကျညှိုးနဲ့ ထိုးထညျ့ လိုကျတာ လကျတဈ ဆဈလောကျဝငျသှားတယျ…ကမြ တှနျ့သှားတာပေါ့.. အှနျ့.. ကမြ ဖငျကိုမြားလိုးမလို့လား မသိ… ဖငျလိုးခံရ တာ တဈအားနာတယျလို့ ပွောသံကွားဖူးတယျ… မဖွဈဘူး..သူ ဘာတှညေဏျမြားအုံးမလို့လဲ..မသိဘူး.. ကမြ မွနျမွနျပှဲသိမျးမှဖွဈ တော့မယျ.. ကမြ သူ့အပျေါတကျထိုငျပွီး လီးကိုဆောကျဖုတျဝတပွေီ့း ဆောငျ့ထိုငျခြ လိုကျပါတယျ…သူ့ လီးကရှညျတယျဆိုတော့ ရငျထဲကို အောငျ့သှားတော့တာဘဲ.. အား…ဟူး…အီး…ဖတျ..ဖတျ..ဖတျ..စှိ..စှိ.. သူကကမြခါးလေးကို ကိုငျပွီး ခပျမွနျမွနျလေး မ တငျ ပေးတယျ…ဆောငျ့ရတာ ဆောကျဖုတျတျောတျော ကြိနျးတယျ… ထိလညျးတဈအားထိတယျ.. ပွီးတာကတော့ မပွီးခငျြဘူး … ကမြ ထိမျးထိမျးသိမျးသိမျးလေး ဆောငျ့တော့ သူအားမရဘူးလေ…
ကမြခွထေောကျ နှဈခြောငျးကို ဆိုဖာပျေါ တငျခိုငျးပါတယျ… ပွီးတော့မှ ကမြ ခါးကိုကိုငျပွီး အောကျက ကော့ပွီး ဆောငျ့ပေးတာကိုး…ကမြ အောငျ့တာပေါ့ ..ပွီးတော့ ကမြ ဆောကျဖုတျ တဈလြှောကျကိုပှတျတိုကျသှားတော့တေျာ့တေျာ့ကိုလညျး ကောငျးပါတယျ…ကမြ ထကျသူက ပိုပွီး ဖီးလာနတေယျလေ…ကမြ သိ တယျ သူပွီးခငျြနပွေီ…ကမြကို ဆိုဖာပျေါလှဲခြ လိုကျပါတယျ…. ပှဲသိမျးအခြီ မညှာမတာ ထိုးတော့မယျလေ… ကမြ ပေါငျကားပေးရုံ ကလှဲ လို့ဘာတတျနိုငျမှာလဲ…. ကမြ ပေါငျနှဈလုံးကို ကိုငျပွီး ထိုးထညျ့လိုကျတာ တဈဆုံးထိဝငျသှားပါတယျ… အား…အား..အူး… ဖတျ..ဖတျ..ဖတျ…ပွိ..ပွိ..ပွိ..ဘှကျ..ဘှကျ.. အခကျြ၂၀ လောကျ မနားတနျးလိုးပါတော့တယျ….ကမြ လညျး ကော့ပွနျ သှားတော့ တာဘဲ… နောကျထပျ၁၅ခကျြ လောကျဆောငျ့ပွီး ကမြဆောကျဖုတျထဲမှာ မှနေ့တေော့တာပါဘဲ…
ကမြလညျးကောငျးလှနျး လို့..ဆောကျရညျတှစေီးကလြာပါတော့တယျ… ပှဲသိမျးလီး…အခကျြ၃၀လောကျမနားတနျးဆောငျ့ လိုကျတော့ ကမြ ဆောကျခေါငျး ထဲ ပူကနဲ ..ပူကနဲ..ဖွဈသှားပါတယျ..သူပွီးသှားပွီ.. အား…ဟား…ဟား..ဟငျး..အငျး… ကမြ မပွီးသေးဘူး…မရပျလိုကျနဲ့ …ဆကျ လုပျလိုကျ..ကမြပွီးခါနီးပွီ..မရပျနဲ့… အား..အား..အား…အီး…အီး..ဝူး.. ဆောငျ့ ..ဆောငျ့..၅ခကျြ လောကျဆောငျ့ပေးစမျးပါ..ကမြ ပွီးတော့မယျ..ဆောငျ့..အငျး..အငျး..ဆောငျ့..ဖတျ..ဖတျ..ဖတျ….အား..အား.. ကမြလညျး ပွီးသှားပါတော့တယျ…သူလညျး တျောတျောမောသှားပုံရတယျ… ကမြလညျး…နောကျဆုံး အခြီ အပီဆှဲလိုကျရတာဆိုတော့…. တဈကိုယျလုံးလညျးနှုံးခြိသှားတော့ တာပါဘဲ..ရှငျ.. ကမြကိုယျပျေါမှာမှောကျသှားသူကတော့…ကမြသူဌေး..ဖွဈလာမဲ့သူပေါ့… သူကမြအပျေါမှာခဏနှပျနပွေီး…ကမြ ပါးလေးကိုကွငျကွငျနာနာ နမျးပေးနပေါတယျ…
အဲဒါကမြတို့ မိနျးခလေး အကွိုကျဆုံးဘဲလေ…သူ့ကိုယျကွီးက ကမြအပျေါမှာလေးနပေမေဲ့ ကမြလညျးသူ့ကိုပွနျဖကျပွီး ..နမျး ပေးလိုကျပါတယျ…သူ့ကိုလညျးသိပျခဈြသှားတာလား… မသိပမေဲ့..သူ့ကိုတော့..ကမြ ဖုတျဖုတျလေးနဲ့ ..နှလုံးသားကတော့…သခငျ တဈယောကျ အဖွဈလကျခံလိုကျပါပွီ…သူကတော့ ကမြကိုလကျခံပွီလား….အထငျသေးသှားပွီလား… ဒှဟစိတျတော့ဖွဈနဆေဲ ပါ….ရငျခုနျနရေဆဲပေါ့…. သူ့ လီးကွီးကို ကမြ ဆောကျဖုတျ ထဲက ပွနျဆှဲထုတျလိုကျတော့ သုတျရညျတှေ ကမြ ဆောကျခေါငျးထဲ ကစီးကလြာပါတော့တယျ… အတှငျးရေးမှုးမလေး မစီစီ… ရှငျ… မငျးကိုဒီနကေ့စပွီး…အတှငျးရေးမှုးမလေး..ခနျ့လိုကျပါပွီ… ကုမ်ပဏီ တိုးတကျအောငျဆောငျရှကျနိုငျပါစေ…. ကမြပြျောလိုကျတာ..ကမြလုပျနိုငျခဲ့ပွီလေ.. ကုမ်ပဏီ တိုးတကျဖို့ထကျ..ကုမ်ပဏီ ပိုငျရှငျ…ဒီနကေ့စပွီး.. တောကျလြှောကျ…ကမြအပျေါတကျလိုးတော့မယျဆိုတာကတော့ကြိနျးသပေေါ့ရှငျ…နောကျတဈခြီမလာ ခငျ..အမွနျလေးအဝတျအစားလဲ..သူဌေးကို..ဒရောသောပါးနှုတျဆကျပွီး…အိမျကိုပွနျလာခဲ့ပါတော့တယျ… ကမြရဲ့ အငျတာဗြူး အတှအေ့ကွုံကတော့ ..အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး……..ဖတျဖတျကိုမောသှားတာဘဲ..လို့ပွောရတော့မှာပါဘဲရှငျ။ ပွီးပါပွီ။
မနက်ဖြန် ဝ၈၀ဝ နာရီ မှာ ဘော့စ်နဲ့တွေ့ရမယ်…စောစောရောက်အောင်လာခဲ့ …လှလှပပ လေးလည်း ပြင်လာခဲ့နော်…ကျမကို သေသေချာချာ မှာနေပါတော့တယ်… မနက်ဖြန် မှာသူဌေးနဲ့ ဘယ်လိုကြုံတွေ့ ရအုံးမယ် မသိ..ရင်တွေခုန်လိုက်တာနော်…. ဘရား သားကုမ္ပဏီ … သူဌေးနဲ့တွေ့ဘို့ မနက်ဝ၈၀ဝနာရီ ချိန်းထားတာ ဆိုတော့ စောစောလေး ကုမ္ပဏီ ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါတယ်.. တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ… မနေ့က ပုလွေရှင် အကိုကြီးနဲ့ လှေခါးထိပ်မှာ တွေ့တော့ ကျမကို သူ့ရုံးခန်းထဲ ခေါ်သွားပါတယ်…ကျမ မ လိုက်ချင်ပေမဲ့….မလွန်ဆန်နိုင်သေးဘူးလေ…ကျမ အလုပ်ခန့်စာက မရသေးဘူး..သူဌေးနဲ့ကလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့…သူ တို့ကိုဘဲအားကိုးရအုံးမှာ.. ဒါကြောင့်သူခေါ်ရာနောက်လိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်…အခမ်းထဲလဲရောက်ရော..ဟင်း..စပြီလေ.. မနေ့က ညီမလေး မှုတ်ပေးတာ သိပ်ကောင်းတာဘဲ..အခုတစ်ခါလောက် မှုတ်ပေးစမ်းပါ.. ရှင်… ကျမ သူဌေးနဲ့တွေ့ရအုံးမယ်လေ.. သူဌေး က မလာသေးပါဘူး ….
ဒို့နှစ်ယောက်ထောက်ခံထားရင် မင်းကိုအလုပ်ခန့် မှာသေချာပါတယ်…ဒို့နှစ်ယောက်က သူဌေးရဲ့ လူယုံတွေလေ… ကျမ မှာငြင်းနိုင် စွမ်းမရှိတော့ပြီ.. သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုချွတ်ပေးလိုက်တော့ ကျမ မှုတ်ပေးရန် မှတစ်ပါး အခြားမရှိတော့ပြီ… သွေးပူလေ့ကျင့်တယ် လို့ဘဲ..စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထင်ထားလိုက်ပါတော့တယ်… ကျမ စေတနာထားပြီး ကောင်းကောင်းလေး စုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..လီးဒစ် လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိုးပေးတာတို့.. လီးထိပ် အကွဲကြောင်းလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ကလိပေးတာတို့ လုပ်ပေးလိုက်ပါ တယ်….သူ့ရဲ့အသက်ရှုသံတွေမြန်လာတယ်.. လီးကြီးလဲ မာတောင်လာတော့တာပေါ့…ကျမ သူ့ရဲ့ လီးထိပ်ကို ခပ်တင်းတင်းလေး နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိစုပ် ထားလိုက်ပြီး လက်က ဂွင်း တိုက် ပေးလိုက်တော့…
ဟင်း..ဟင်း..ကောင်းလိုက်တာ..အင်း…ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါ..ဟင်း.. ကျမ ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးလိုက်တော့ သူကောင်း လွန်းလို့ သူ့လီးကြီးကို ရှေ့ကိုထိုး ..ထိုးပေးပါတော့တယ်..ကျမ လည်ချောင်းထဲ ကိုဝင်အောင်သွင်းနေတာလေ…ကျမသိတာပေါ့… နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ဖိထားလိုက်တော့ မဝင်တော့ဘူးပေါ့.ဒ.ါပေမဲ့..အချိန်ကလည်း မရှိ တော့ဘူးဆိုတော့..တစ်ချက်..နှစ်ချက်လောက် လည်ချောင်းထဲ ထိုးထည့် ပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ..ချောင်းဆိုးရတော့တာပေါ့… အဲဒီ တော့ သူပြီးချင်ပြီလေ..ကျမ ကိုမညှာမတာ လည်ဂုတ်က ကိုင်ပြီး ထိုးထိုးထည့်နေတော့တာဘဲ… သူ့လီး အဆမတန် မာလာပြီလေ ..ကျမသူ့ လီးကိုဂွင်းတိုက်ပေးလိုက် တော့….သုတ်ရေတွေ ကျမ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်တော့တာပါဘဲ.. သူ့လီးကို အပြင်မှာထုတ်ပြီး ခပ်မြန်မြန်လေး ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက် ပါတယ်..
အား..အီး. .အင်း…ဝူး…ဟင်း… သူ့သုတ်ရည် တွေ ကျမ မျက်နှာကို ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်..ကျမ အင်္ကျီ စကတ် တွေ ပေ ကုန်တော့တာပေါ့.. ခက်ပြီ …ကျမ အခုမှ ဝတ်စုံပြန်လဲလို့ကလည်း..အချိန်မမှီတော့ပြီ…ကုမ္ပဏီက ပေးထားတာက လည်း..လောလောဆယ် ဒီတစ်စုံဘဲ ရသေးတာမို့ …ကျမ ငိုချင်လာမိပါတော့တယ်… ငိုမဲ့မဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်ပြီး …ပုလွေရှင် အကိုကြီးက..ပြုံးစစနဲ့.. စိတ်မပူပါနဲ့ စီစီလေး ..အကိုကြီး အပေါ်ကောင်းတဲ့ ညီမလေးကို ‘ဒုက္ခမရောက်စေရပါဘူး…အကိုကြီးဆီ မှာ..အရင်က အတွင်းရေးမှူး မလေးဝတ်သွားတဲ့ ဝတ်စုံရှိတယ်…အဲဒီဝတ်စုံ ဝတ်သွားပါ..
ဘော့စ်ကဒီဝတ်စုံလေးကို သိပ်သဘောကျတာ..သူကိုယ်တိုင် အမြတ်တနိုးနဲ့သူ့ဆော်လေးကိုဝယ်ပေးထားတာပါ….ဒီဝတ်စုံလေးကို တွေ့ရင်..ဘော့စိတ်တွေ လှုပ်လျှားလာမှာပါ… ပြီးတော့..ညီမလေးကို…အပျိုလားလို့ မေးရင်..ယောကျာ်းမရှိလို့ အပျိုလို့ ပြောရင်ရ ပါတယ်…အပျိုစစ်စစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးရှင်.. လို့ဖြေနော်… ရှင်….အကိုကြီးတို့ ပြောတုန်းက အပျိုစစ်စစ်မှ ကြိုက်တာဆို..အခု ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.. ဟုတ်တယ်လေ..အကိုကြီးတို့ကတော့ အပျိုစစ်စစ်မှ ကြိုက်တယ်…ဘော့စ် ကတော့ နောက်ကြောင်းမရှုတ် ရအောင် အပျိုတော့ ဖြစ်ရမယ်..
‘ဒါပေမဲ့ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကို ကြိုက်တယ်.. အပျိုစစ်စစ် ဆိုရင်ပြောရ ဆိုရ စည်းရုံးရတာတွေ အတင်းယူခိုင်းတာတို့ ချိန်း ခြောက်တာတို့ ဖြစ်ဘူးတယ်.. ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံမရှိတော့ နားလည်မှုမရှိဘူးလေ.. အဲဒါတွေ သင်ပေးဘို့ကလည်း အချိန်မပေး နိုင်ဘူး.. နောက်တစ်ချက်.. ဘော့စ်က ပုလွေမှုတ်ပေးတာကြိုက်တယ်… အကိုကြီးလိုပေါ့…. နောက်ပြီးပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လိုးရတာကို ကြိုက်တယ်… ဟိုအကိုကြီးလိုပေါ့…အကိုကြီး တို့နှစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီးပြီ ဆိုလို့ကတော့ ညီမလေး ဘော့စ်နဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ… ပညာစုံ သင်ပေးလိုက်ပြီလေ… ကျေးဇူးပါဘဲရှင်..နောက်လည်း အချိန်ရယင် မှုတ်ပေးပါ့မယ်..အဝတ်အစားတွေ လဲပြီးပြီ ဆိုတော့ သွားရအောင်နော် အကိုကြီး လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်.. အလုပ်ရှင် သူဌေး၏ ရုံးခမ်း မို့ ဝင်ရမှာကြောက်နေသည်…ပုလွေရှင် အကိုကြီး လိုက်ပို့ပေး၍ ဝင်သွားလိုက်သည်.. အထဲမှာ သူဌေးနှင့် အတူ မနေ့က လိုးခဲ့ကြသည့် အကိုကြီးကိုတွေ့ရ၍ ဝမ်းသာသွားသည်… ယုံကြည်စိတ်များလည်း..ရှိလာသည်..
သူဌေးက ကျမ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ လျှောက်လွှာကိုကြည့်နေသည်..အကိုကြီးက ကျမကိုမျက်စိမှိတ်ပြပြီး လက်မထောင်ပြသည်.. အခြေအနေကောင်းတယ် ပေါ့…ကျမ မကြောက်တော့ပါ…ရဲရဲဝံဝံ ရင်ဆိုင်ရန် အားအင်များ အပြည့်အဝရှိနေပြီဖြစ်သည်… မစီစီ ရှင် မင်းက အပျိုစစ်စစ်လား ရုတ်တရက် ကြီးမေးလိုက်တော့ ကျမ ဘာက စပြီးဖြေရမယ်မှန်းမသိ ကြောင်သွားပါတယ်.. အကို ကြီးက ဝင်ပြီးဖြေပေးပါတယ်.. “`သူဌေး …သူကလေ…“ သူဌေးက လက်ကာပြလိုက်ပြီး…… မင်းကိုမေးတာမဟုတ်ဘူး..မင်းထွက် သွားနိုင်ပြီ ကျမ တုန်လှုပ်သွားပါတယ်..အကိုကြီးကိုမသွားဘို့ ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်… အကိုကြီးက ကျမကိုပြုံးပြီး…ခေါင်းညိမ့်ပြ တယ်…ကျမ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း တော့မသိဘူး ..စိတ်မပူနဲ့လို့ဆိုလိုတာလား..ကျမ မတားတော့ပါဘူး.. အကိုကြီးလည်းထွက်သွား ရော သူဌေးက ကျမကို ထပ်မေးပါတယ်…
မစီစီ မေးတာ မဖြေသေးဘူးလေ.. ကျမ သတိရ ပြီ…ပုလွေရှင် အကိုကြီးသင်ပေးလိုက်တာလေ…ချက်ချင်းဘဲ..ပြန်ဖြေလိုက်ပါ တယ်… ကျမ ယောကျာ်း တစ်ခါမှ မရဘူးသေးပါဘူး..မင်္ဂလာလည်း တစ်ခါမှ မဆောင်ဘူးသေးပါဘူး… ဒါကြောင့် အပျိုလို့ ပြော မယ် ဆိုရင်တော့ရပါတယ်..ဒ‘ါပေမဲ့ အပျိုစစ်စစ်တော့ မဟုတ်ရပါဘူး ရှင်… သိပ်ကောင်းတဲ့ အဖြေဘဲ…မစီစီ အမှတ်ပြည့် ပေးလိုက်ပါတယ်..မိန်းခလေး တော်တော်များများက အပျိုမဟုတ်ဘူးလို့. ပြောရမှာကို ဝန်လေးကြတယ်.. ဒ‘ါ့ကြောင့် ညာပြော တတ်ကြတယ်…
ဖက်ဖက်ကြီးကိုသွားတာဘဲ ၂ ဒါဟာ လိမ်ညာမှုဘဲ..သစ္စာမရှိတာဘဲ…မစီစီက တော့ ရိုးသားတယ်…ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတယ်..ဒီ အချက်ကို အဓိကလိုချင်တာဖြစ်တယ်… သိပ်ကြိုက်သွားပြီ မစီစီ…. နှုတ်မေးခွန်းကတော့ ဒ‘ီလောက်ပါဘဲ…လက်တွေ့ စမ်းသတ် မှုဘဲ ကျန်ပါတော့တယ်… ကျမ သိပ်ပျော်သွားတယ်..ပုလွေရှင် အကိုကြီး ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ..နောက်တွေ့ရင် ကောင်းကောင်းလေး မှုတ်ပေးလိုက်အုံးမယ်… သူဌေး လေ….ကျမဆီကို ထလာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး ကြည့်နေလိုက် တာ အကြာကြီးဘဲ…. ကျမ ဘာလုပ်သင့်လဲ…ကျမက စ ရမှာလား..သူကစမှာလား…ကျမသူ့ မျက်နှာကို အကဲခတ်နေရတာ ပေါ့… သူ ကျမ ပုခုံးလေးကို ဖွဖွလေး ကိုင်ပြီး ဆက်တီခုံ ကိုခေါ်သွားပါတယ်…
ကျမလည်း အလိုက်သင့် လိုက်သွားတာပေါ့.. ဆက်တီခုံပေါ်မှာထိုင်လိုက် တာနဲ့သူကျမကို ဖက်ပြီးပါးနှစ်ဖက်ကိုနမ်းပါတယ်…သူက စပြီလေ….ကျမငြိမ်ငြိမ်လေး နေပေးတော့..သူတစ်ဆင့်တက် ပြီး ကျမ နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းတယ်..ပြီးတော့ စုပ်တယ် ကျမလည်း တုန့်ပြန်မှု ပေးတဲ့အနေနဲ့ သူနှုပ်ခမ်းကို ပြန်စုပ်ပေးလိုက်တာ ပေါ့ ..ဒါမျိုးတော့လာမလုပ်နဲ့…ရဲကိုကိုက သေချာသင်ပေးထားပြီး သား….နှုတ်ခမ်းချင်း စုတ်တဲ့အခါ…လျှာလေးက ဝိုက်ဆွဲ..ကာထိုး…တဲ့ထိုး အမျိုးမျိုးလုပ်ပြလိုက်တော့…သူကျေနပ်သွားတယ်..သူ့ ရဲ့လျှာနဲ့ ကျမ နှုတ်ခမ်းကိုလျှောက် ထိုးနေတော့ ဘာရမလဲ..သူ့လျှာကို ကျမ စုပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့.
သူကလည်း အားကျမခံ ကျမရဲ့ လျှာကို ပြန်စုပ်တယ်လေ…ကျမ ဖီလင်တက်လာတယ်..အပေါ်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ပေးလိုက် ..အောက်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ပေးလိုက် အပြန်အလှန် နမ်းစုပ်နေလိုက်ကြတာ လောကကြီးကို မေ့သွားတာဘဲ.. နမ်းနေရင်းက သူ့လက်တွေကျမရဲ့ စနေနှစ်ပွင့် ပေါ် ရောက်လာတယ်.. သူကျမ ရင်သားတွေကို အင်္ကျီ ပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်ပြီး..ကျမ ကိုအကဲခတ်နေတယ်..ကျမ လည်းဖီးတက်နေ တော့.. ချွတ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလား …ရှင်ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ…သူ့ကိုပြုံးစစနဲ့ ပြန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့…
သူ ..ကျမ နို့သီးကို ဖြစ်ရင်းနဲ့ ကျမ နားရွက် ကိုပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေးလိုက်တာ…တစ်ကိုယ်လုံးကိုထွန့်ထွန့်လူးသွားတာဘဲရှင်…လည်ပင်း တစ်လျှောက်ကိုလည်း.. လျှာနဲ့..ဖိဆွဲလေး ဆွဲလိုက်တော့..ကျမ ကြက်သီးမွေးညင်းလေးတွေတောင်ထသွားတယ်….ကျမသိတာ ပေါ့..ကျမကိုစိတ်လာအောင် ဆွပေးနေတာမလား…ပြီးတော့မှ..ဟင်း..ပြောလိုက်ချင်ဘူး…. ဘာရမလဲ..ကျမလည်း ..သူ့ အင်္ကျီ ကိုဆွဲလှန်လိုက်ပြီး .. သူ့ ဗိုက်သားလေးတွေကို လျှာနဲ့ရက်ပေးလိုက်တာ သူလည်း ထွန့်ထွန့်ကို.လူးသွားတာဘဲ. သူ..ကျမ အပေါ်က ကုတ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်ပါတယ်..
အတွင်းက အင်္ကျီကို ကျယ်သီးဖြုတ်လိုက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ စနေနှစ်ခိုင်ကို ဖြစ်ညှစ်စုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်…ပန်းနုရောင်သန်းနေတဲ့ ကျမရဲ့ နို့သီးထိပ်လေးကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ ဆွပေးတော့ကျမ နို့သီးခေါင်းလေး မာလာတာပေါ့… သူ့ပါးစပ်ကြီးနဲ့ ကျမ နို့နှစ်လုံးကို တစ်ဖက်စီ စို့ပေးပါတယ်..နို့သီးလုံးလေးတွေကိုလျှာနဲ့လှည့်ပေးလိုက်တော့….ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိအောင်ဘဲရှင်…ကျမ တစ်အားယားလာတာပေါ့ နို့သီးလည်းယားတယ်…ဖုတ်ဖုတ်လည်းယားလာတယ်..
တစ်ကိုယ်လုံးခါရမ်းသွားလောက်အောင်…ဖီးတက်လာပါတော့တယ်…ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူနေတော့တာပါဘဲရှင်… ကျမ ဆောက် ဖုတ်ထဲက အရည် ကြည်လေး တွေထွက်လာတော့တာပေါ့….နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကိုစို့ပေးနေရာက ကျမ ဗိုက်သားလေးတွေကို.. လျှာနဲ့ရက်ပေးပါတယ်…ယားကျိကျိနဲ့ အတော်ခံလို့ကောင်းတယ်…ကျမ ချက်ကို လျှာဖျားလေးနဲ့ထိုးမွှေလိုက်တော့ ကျမ အသဲတွေ ကလီစာတွေ..ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သလို ခံစားရပါတယ်..ရှင်.. ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း…အင်း….အင်း… သူ့ ပါးစပ် ကြီးက ကျမ ဆီးခုံမွှေးတွေကို လျှောက်ရက်ပေးနေ ပြန်ပါပြီ…ကျမ ကော့ပြန်နေတော့တာဘဲ…ကျမ ဆောက်စိကိုလျှက် ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာ ဘဲ…ကျမ သိပ်ယားနေတာကိုး တောင့်တမိပါတယ်…..
ကိုကိုရယ်..စီစီရဲ့စိစိလေးကို လျှက်ပေးပါလားရှင်ရယ်…ပါးစပ်က ထုတ်ပြောလို့လဲမရဘူးလေ..မိန်းမသားဘဝကိုး…ရင်ထဲကဘဲ တောင့်တနေမိတော့တယ်…ကိုကိုရယ် ရှင်ဝဋ်လည်လိမ့်မယ်သိလား….. သူလေ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို လျှောက်ရက်ပေးနေ တာ..စိတ်တိုချင်စရာပါဘဲ… တမင်လုပ်နေတာလားမသိ…ကျမ မတတ်နိုင်တော့ပြီ… ကျမ သူ့ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ဆောက်ဖုတ်ဝမှာ တေ့ ပေးလိုက်ပါတော့တယ်…. ဆောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်း တလျှောက် ဆုန်ချီ ဆန်ချီ လျှာနဲ့ထိုးလိုက် ရက်လိုက်နဲ့ပေါ့….ကျမ ဆောက်စိကိုလုံးဝ မထိဘူး… ကျမ အလိုကိုသူမလိုက်ဘူး…သိပ်ဆိုးတဲ့ လူကြီး… ကျမသိပ်ခံချင်နေပြီ..လိုးပါတော့လို့..အော်ဟစ် သာပစ်လိုက်ချင်တော့တယ်….
ခြေလေးဆောင့်ဆောင့်ပြီး ဆန္ဒပြလိုက်တော့မှစိစိလေးကိုလျှာနဲ့ လျက်လိုက်ပါတော့တယ်.. သူ တော်တော်လေးကို မိန်းမ ကျမ်းကျေတဲ့လူကြီး…ကျမရဲ့ရွှေကြုတ်လေးကို အသာအယာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖြဲလိုက်တော့…ပတ္တမြား စိစိလေး ပြူးထွက်လာတာ ပေါ့…အဲဒီ.. ပတ္တမြားလေးကို…ချိုချင်ယက်သလို…ယက်လိုက်…..တဖြေးဖြေးချင်း…လျှာလေးနဲ့…တဆတ်ဆတ် ထိုးလိုက်…လျှာ ပြားကြီးနဲ့….ပွတ်ဆွဲလိုက်…ပညာကုန်ပြနေလိုက်တာ…ကျမ..နှစ်ချီလောက်တောင်.. ပြီးသွားတယ်ထင်ပါရဲ့..ကောင်းလိုက်တာကို လွန်ပါရော…ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း….. ကျမငြိမ်သွားတော့…သူ နောက်တစ်မျိုးလုပ်ပြန်ပြီ…… သူလေ ကျမ ဆောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ ထိုးထည့်လိုက်တယ်…အရည်တွေကလည်းထွက်နေတော့ ချောချောချူချူဘဲ ဝင်သွားပါတယ်…လက် ကိုပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး…ဆောက်ခေါင်း အမိုးကို လှန်လှန်ပြီးကုတ်နေလိုက်တာ… ကျမဆောက်ခေါင်းထဲက အကြောလေးကို သွားသွားပြီးခလုပ်တိုက်တော့ ကျင်ကျင်သွားတာဘဲ…ယားလဲ တစ်အားယားတယ်…သူများတွေပြောပြောနေတဲ့ ဂျီစပေါ့…ဆို တာ လားမသိဘူး…….
အား..အား…အား….. အဲသလိုလုပ် နေ တော့ ကျမဆောက်ရည်တွေပိုထွက်လာတာပေါ့…လက်တစ်ချောင်းချောင်သွားတော့ လက် နှစ်ချောင်းထိုးသွင်းလိုက်ပြန်ပြီ….ကိုကိုရယ်..ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ…ဟင်….ညီမ…ခံချင်နေပြီဆိုတာသိရဲ့လား… ဟင်း..အင်း..အင်း… လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ကျမ ဆောက်ခေါင်းထဲက အကြောကိုလည်းကုတ်မိရော ..ကျမတောင့်တနေတဲ့ ဆောက်စိ လေးကို လျှာနဲ့ထိုးပြီးရက်လိုက်ပါတော့တယ်…အချိန်ကိုက်ကွက်တိဘဲ…. ကျမအလိုလို ကော့ ကော့ပေး နေမိပါတယ်… ကျမ ရုံး လို့လဲမရ ရုံးလည်းမရုံးချင် …ကောင်းလိုက်တာလဲ လွန်ပါရော…. ဆောက်ခေါင်းထဲက အကြောကို သူကုတ်ထားလိုက်ပြီး..ကျမ ဆောက်စိကို လျှာနဲ့ အဆက်မပြတ်ရက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့….
အား..အား..ဟား..ဟင်း..ဟင်း…အီး…အစ်..အစ်.. ကျမ ဆောက်ခေါင်းတစ်လျှောက် ရှုံ့ချီ ပွချီ ဖြစ်လာပြီး …ကျမတစ်ချီ.ထပ်ပြီး..ပြီးသွားပါတယ်….ဆောက်ရည်တွေလည်း…စီးထွက်လာ ပါ တော့တယ်ရှင်.. သူ ကျမ ပြီးသွားတာကို သိတယ်လေ…သူ့အင်္ကျီတွေချွတ်လိုက်ပါတယ်.. ကျမကိုဆွဲထူလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်ပါတယ်…နို့နှစ်ခိုင်ကိုလည်း…တစ်ဖက်..တစ်လှည့်စီ..စို့ပေးလိုက်… လက်တစ်ဖက်ကလည်းတစ်ကိုယ်လုံးလိုက်ပွတ်လိုက် နဲ့…အလုပ်ကိုရှုတ်နေတော့တာဘဲ…. ခဏကြာတော့ ကျမ စိတ်တွေ လှုပ်လျှားလာပါတော့တယ်..သွေးနဲ့သားနဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ဆွ နေမှတော့ဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲ…. ဒီတစ်ခါတော့ကျမအလှည့်.. ရဲကိုကိုနဲ့ဟိုအကိုကြီးနှစ်ယောက်သင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေကို အစွမ်းကုန်အသုံးချပြီး…သူ့စိတ်ကိုဖမ်းစားရမှာပေါ့…ကျမလုပ်နိုင်မှာပါ…. ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးပြီး…ကျမ လုပ်ငန်းစပြီပေါ့… ဘယ်ကစရင်ကောင်းမလဲ…ကျမ တွေ့ပါပြီ… ဒေါသတကြီးနဲ့ ကျမကိုယ် ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိမ့်ပြီးခေါ်နေတဲ့… သူ့ငယ်ပါကြီး ပေါ့…. သူလည်းကျမတစ်ကိုယ်လုံးစိတ်ကြိုက်နှယ်ထားတော့..စိတ်လာနေပြီလေ..ကျမသိတာပေါ့…သူ့ လီးကြီးက မာတောင်နေ တာဘဲ…ကျမ သူ့ရဲ့ လမွှေးတွေကိုလျှာနဲ့ရက်ပေးလိုက်တယ်…
ဖက်ဖက်ကြီးကိုသွားတာဘဲ ၃ ဥလေးနှစ်လုံးကိုလည်း..ဖွဖွလေးစုတ်ပေးလိုက်တယ်… အင်း..အင်း… ငြီးသံသဲ့သဲ့ထွက်လာ တယ်….ဂွေးဥနှစ်လုံးကိုမတင်လိုက်ပြီး… ပေါင်ခြံလေးတွေကို လျှာနဲ့ရက်ပေးလိုက်တယ်… ပြီးတော့ သူ့ဂွေးဥလေး နှစ်လုံးကို လျှာနဲ့ ရက်ပြီး ပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေးလိုက်တော့ …… သူ့လီးက အရည်ကြည်တွေထွက်လာတာပေါ့… သူ့လီးရဲ့ဒစ်ထိပ်လေးကိုလုံးဝမထိအောင် လုပ်ပေးထားတာလေ…. သိတယ်မလား… သူများတုန်းက..သူလုပ်ထားတာ… ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း.. သူဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေပြီ…သူ့ အလိုကိုမလိုက်ဘဲထားတော့….သူ့ပညာနဲ့သူထိနေပြီပေါ့.. မှတ်ပြီလား… သူမနေ နိုင်တော့ဘူး…ကျမ ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးကို ပါးစပ်ဝမှာလာတေ့ပေးတယ်…ကျမ ရီချင်လိုက်တာ… လက်စားချေလိုက်ရလို့လည်း ကျေနပ်နေမိတယ်…ပညာနည်းနည်း ပေးလိုက်တာပါ… တစ်အားလည်း..ပညာမပေးရဲဘူး…သူစိတ်ဆိုးသွားမှဒုက္ခ…အလုပ်ခန့်စာကရသေးတာမဟုတ်.. အခုထိ စာမေးပွဲ ဖြေနေဆဲလေ..သိတယ်မလား… ကျမ စေတနာနဲ့ စိတ်ပါလက်ပါ ဒစ်လေးကို စုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်….သူကောင်းလွန်းလို့ တ ဆတ်ဆတ်တုန်နေတော့တာဘဲ… လီးကိုအရင်းက ကိုင်ပြီးအထက်အောက် ပွတ်တိုက် ပေးလိုက်တော့ သူ့ဒစ်ညိုကြီး.. ဒေါသအ မြောင်းမြောင်းထနေလိုက်တာ…သူများကိုတစ်ကယ်စိတ်လာစေတယ်…
ဒါကြီးနဲ့..ကျမကို အပီဆွဲတော့မှာလေ…ဟင်း..ဟင်း… သူ ကျမ ဖင်ကိုလှမ်းကိုင်လိုက်တယ်.. ဖင်ဝလေးကို လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးထည့် လိုက်တာ လက်တစ် ဆစ်လောက်ဝင်သွားတယ်…ကျမ တွန့်သွားတာပေါ့.. အွန့်.. ကျမ ဖင်ကိုများလိုးမလို့လား မသိ… ဖင်လိုးခံရ တာ တစ်အားနာတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်… မဖြစ်ဘူး..သူ ဘာတွေညဏ်များအုံးမလို့လဲ..မသိဘူး.. ကျမ မြန်မြန်ပွဲသိမ်းမှဖြစ် တော့မယ်.. ကျမ သူ့အပေါ်တက်ထိုင်ပြီး လီးကိုဆောက်ဖုတ်ဝတေ့ပြီး ဆောင့်ထိုင်ချ လိုက်ပါတယ်…သူ့ လီးကရှည်တယ်ဆိုတော့ ရင်ထဲကို အောင့်သွားတော့တာဘဲ.. အား…ဟူး…အီး…ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်..စွိ..စွိ.. သူကကျမခါးလေးကို ကိုင်ပြီး ခပ်မြန်မြန်လေး မ တင် ပေးတယ်…ဆောင့်ရတာ ဆောက်ဖုတ်တော်တော် ကျိန်းတယ်… ထိလည်းတစ်အားထိတယ်.. ပြီးတာကတော့ မပြီးချင်ဘူး … ကျမ ထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်းလေး ဆောင့်တော့ သူအားမရဘူးလေ…
ကျမခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို ဆိုဖာပေါ် တင်ခိုင်းပါတယ်… ပြီးတော့မှ ကျမ ခါးကိုကိုင်ပြီး အောက်က ကော့ပြီး ဆောင့်ပေးတာကိုး…ကျမ အောင့်တာပေါ့ ..ပြီးတော့ ကျမ ဆောက်ဖုတ် တစ်လျှောက်ကိုပွတ်တိုက်သွားတော့တော့်တော့်ကိုလည်း ကောင်းပါတယ်…ကျမ ထက်သူက ပိုပြီး ဖီးလာနေတယ်လေ…ကျမ သိ တယ် သူပြီးချင်နေပြီ…ကျမကို ဆိုဖာပေါ်လှဲချ လိုက်ပါတယ်…. ပွဲသိမ်းအချီ မညှာမတာ ထိုးတော့မယ်လေ… ကျမ ပေါင်ကားပေးရုံ ကလွဲ လို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ…. ကျမ ပေါင်နှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တာ တစ်ဆုံးထိဝင်သွားပါတယ်… အား…အား..အူး… ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်…ပြိ..ပြိ..ပြိ..ဘွက်..ဘွက်.. အချက်၂၀ လောက် မနားတန်းလိုးပါတော့တယ်….ကျမ လည်း ကော့ပြန် သွားတော့ တာဘဲ… နောက်ထပ်၁၅ချက် လောက်ဆောင့်ပြီး ကျမဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ မွှေ့နေတော့တာပါဘဲ…
ကျမလည်းကောင်းလွန်း လို့..ဆောက်ရည်တွေစီးကျလာပါတော့တယ်… ပွဲသိမ်းလီး…အချက်၃၀လောက်မနားတန်းဆောင့် လိုက်တော့ ကျမ ဆောက်ခေါင်း ထဲ ပူကနဲ ..ပူကနဲ..ဖြစ်သွားပါတယ်..သူပြီးသွားပြီ.. အား…ဟား…ဟား..ဟင်း..အင်း… ကျမ မပြီးသေးဘူး…မရပ်လိုက်နဲ့ …ဆက် လုပ်လိုက်..ကျမပြီးခါနီးပြီ..မရပ်နဲ့… အား..အား..အား…အီး…အီး..ဝူး.. ဆောင့် ..ဆောင့်..၅ချက် လောက်ဆောင့်ပေးစမ်းပါ..ကျမ ပြီးတော့မယ်..ဆောင့်..အင်း..အင်း..ဆောင့်..ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်….အား..အား.. ကျမလည်း ပြီးသွားပါတော့တယ်…သူလည်း တော်တော်မောသွားပုံရတယ်… ကျမလည်း…နောက်ဆုံး အချီ အပီဆွဲလိုက်ရတာဆိုတော့…. တစ်ကိုယ်လုံးလည်းနှုံးချိသွားတော့ တာပါဘဲ..ရှင်.. ကျမကိုယ်ပေါ်မှာမှောက်သွားသူကတော့…ကျမသူဌေး..ဖြစ်လာမဲ့သူပေါ့… သူကျမအပေါ်မှာခဏနှပ်နေပြီး…ကျမ ပါးလေးကိုကြင်ကြင်နာနာ နမ်းပေးနေပါတယ်…
အဲဒါကျမတို့ မိန်းခလေး အကြိုက်ဆုံးဘဲလေ…သူ့ကိုယ်ကြီးက ကျမအပေါ်မှာလေးနေပေမဲ့ ကျမလည်းသူ့ကိုပြန်ဖက်ပြီး ..နမ်း ပေးလိုက်ပါတယ်…သူ့ကိုလည်းသိပ်ချစ်သွားတာလား… မသိပေမဲ့..သူ့ကိုတော့..ကျမ ဖုတ်ဖုတ်လေးနဲ့ ..နှလုံးသားကတော့…သခင် တစ်ယောက် အဖြစ်လက်ခံလိုက်ပါပြီ…သူကတော့ ကျမကိုလက်ခံပြီလား….အထင်သေးသွားပြီလား… ဒွဟစိတ်တော့ဖြစ်နေဆဲ ပါ….ရင်ခုန်နေရဆဲပေါ့…. သူ့ လီးကြီးကို ကျမ ဆောက်ဖုတ် ထဲက ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ သုတ်ရည်တွေ ကျမ ဆောက်ခေါင်းထဲ ကစီးကျလာပါတော့တယ်… အတွင်းရေးမှုးမလေး မစီစီ… ရှင်… မင်းကိုဒီနေ့ကစပြီး…အတွင်းရေးမှုးမလေး..ခန့်လိုက်ပါပြီ… ကုမ္ပဏီ တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ…. ကျမပျော်လိုက်တာ..ကျမလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလေ.. ကုမ္ပဏီ တိုးတက်ဖို့ထက်..ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်…ဒီနေ့ကစပြီး.. တောက်လျှောက်…ကျမအပေါ်တက်လိုးတော့မယ်ဆိုတာကတော့ကျိန်းသေပေါ့ရှင်…နောက်တစ်ချီမလာ ခင်..အမြန်လေးအဝတ်အစားလဲ..သူဌေးကို..ဒရောသောပါးနှုတ်ဆက်ပြီး…အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်… ကျမရဲ့ အင်တာဗျူး အတွေ့အကြုံကတော့ ..အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း……..ဖတ်ဖတ်ကိုမောသွားတာဘဲ..လို့ပြောရတော့မှာပါဘဲရှင်။ ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဖကျဖကျကွီးကို မောသှားတာဘဲရှငျ